Waa maxay hadiyado wanaagsan? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Waa maxay hadiyadaha wanaagsan?
Rasuul Yacquub wuxuu warqaddiisa ku qoray: «Dhammaan hadiyadaha wanaagsan iyo hadiyado dhan oo kaamil ah waxay ka soo dhacaan xagga sare, xagga aabbaha nuurka, oo aan lahayn isbadal ama beddelidda iftiinka iyo gudcurka» (Yacquub 1,17).
Markaan fiiriyo hadiyadaha Ilaah, Waxaan arkaa inuu isagu nolol leeyahay. Iftiinka, ammaanta dabeecadda, qorrax dhaca dahabka, midabbada dhalaalaysa ee qorrax ka qorraxda dusha sare ee barafka, cagaarka cagaaran ee kaymaha, badda midabbada doogga ku yaal ubaxu. Waxaan arkaa waxyaabo kale oo badan oo aan ku faani karno oo keliya haddii aan waqti u qaadno. Ilaah waxaas oo dhan wuxuu ina siiyaa waxyaalahan oo dhan, iyada oo aan loo eegin waxa aad rumeysan tahay. Mu'minka, caqiidada, caqiidada, gaalada iyo qofka kale ee mu'minka ah, dhammaantood way ku raaxeysan karaan hadiyadan wanaagsan. Eebbe wuxuu ka di'iyaa kuwa samo fala oo xaqdarro ah. Wuxuu hadiyadan wanaagsan siiyaa qof walba.
Ka fikir waxa xirfadaha cajiibka ah ee ay dadku leeyihiin, ha ahaato xagga farsamada, dhismaha, isboortiga, muusikada, suugaanta, farshaxanka - liistadu waa mid aan dhammaanayn. Eebbe wuxuu siiyey karti qof walba. Dadka asalkasta asal ahaan buu u barakeeyey. Meeye xaggee bay ka imanayaan awoodahan, hadduusan ahayn xagga Aabbaha nuurka, oo bixiya hadiyadaha wanaagsan oo dhan?
Dhanka kale, adduunka waxaa ka jira silica iyo murugada badan. Dadku waxay ku jiiteen dabayl nacayb, hunguri, naxariis la'aan iyo waxyaabo sababa silica weyn. Kaliya waa inaad fiirisaa adduunka iyo jihooyinkiisa siyaasadeed si aad u aragto sida ay halis u tahay. Waxaan aragnaa wanaag iyo xumaanba adduunka iyo dabeecadda aadanaha.
Muxuu hadiyado qurux badan Ilaah siiyay mu'miniinta la kulmay wanaagga iyo xumaanta adduun? Kuwani waa dadka uu Jeegaan u rogo inuu ku dhiirigeliyo inay u arkaan inay tahay sabab gaar ah oo lagu farxo markay tahay inay soo maraan dhammaan noocyada imtixaannada.
Marka horeba, Ereyga Ciise wuxuu leeyahay in ku alla kii rumaystaa Wiilka keliya ee Ilaah uu badbaado. Laga badbaadiyey maxaa? Isaga ama iyadu waa laga badbaadiyey mushahaarka dembiga, oo ah dhimashada weligeed ah. Sidoo kale, Ciise wuxuu ka hadlay cashuurqaadaha macbudka dhex taagan oo laabtiisa garaacaya oo yiri: "Ilaahay ha u naxariisto nin dembi leh!" Waxaan idinku leeyahay, Isagu xaqnimadiisa ayuu gurigiisa u aaday (Luukos 18,1314).
Nasiib darrose, qaladaadkeena dartood, waxaan ula halgameynaa nolosha dembiile. Qaarkood waxay isku dayaan inay cudurdaar u caddeeyaan, laakiin waa ay sii jirtaa.
Sababo badan ayaa jira oo khaladaadkeenna hore aan keligood nooga tegin. Taasi waa sababta dadka qaarkiis ay ugu tagaan cilmi-nafsi-yaqaanka si ay xal ugu helaan. Ma jiro talo bini-aadamku qaban karin wixii uu daadiyey dhiigii Ciise. Kaliya Ciise wuxuu ku hubin karnaa in wax walba la cafiyay, waqtigeenna iyo kan hadda jira, xitaa mustaqbalkeenna. Waxaannu xor ku nahay oo keliya Masiixa. Sidii Bawlos ku yidhi, xukun ma laha kuwa ku jira Masiixa (Rooma 8,1).
Intaa waxaa sii dheer, waxaan haysanna hubin ah in haddii aan mar kale dembaabno oo "dembiyadeenna qiranno, isagu waa aamin iyo caaddil, in uu dembiyadeenna inaga cafiyo, oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan" (1 Yooxanaa 1,9).
Ciise wuxuu kaloo yiri Aabaha Iftiinka iyo Bixiyaasha Hadiyadaha wanaagsan wuxuu ina siin doonaa hadiyadda Ruuxa Quduuska ah - waxbadan oo waalidkeen aadane ah ay nagu sameyn karaan. Wuxuu xertiisii ​​u xaqiijiyey inuu tegayo, laakiin ballankii aabihiis, sida lagu sheegay Yoo'eel 3,1, waa la fuliyay, kaasoo ka dhacay maalintii Bentakostiga. Ruuxa Quduuska ah ayaa ku soo degay iyaga oo weligiis ku dhex jiray dhammaan Masiixiyiinta rumeysan.
Markii aan aqbalno Masiixa oo aan helno Ruuxa Quduuska ah, ma aanan helin ruux cabsi leh, laakiin Ruuxa xoogga, jacaylka, iyo miyirka (2 Timoteyos 1,7). Awoodani waxay noo suurtogelinaysaa inaan iska caabino weerarada sharka, inaan ka hor tagno, sidaa darteed wuu inaga cararaa.
Galatiya 5,22: 23-1 wuxuu qeexayaa midhaha uu Ruuxa Quduuska ahi noogu soo baxayo. Waxaa jira sagaal waji oo midhihan, oo laga bilaabayo laguna dhejiyay jacayl. Sababtoo ah Ilaah markii hore wuu jecel yahay, waxaan awoodnaa inaan "ku jeclaano Rabbiga Ilaaheenna ah qalbiyadeenna oo dhan iyo deriskeenna sida nafteenaba". Jacaylku aad ayuu muhiim u yahay in Bawlos ku qoray qeexitaan ku saabsan 13 Korintos wuxuuna ku tilmaamay waxa aan ku dhex mari karno. Wuxuu ku soo gunaanaday inay jiraan saddex shay oo hadhay - iimaan, rajo, iyo jacayl, laakiin jacaylku waa kan ugu weyn.
Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan ku noolaano sida carruurta Ilaaha nool rajada badbaadada, badbaadada iyo nolosha weligeed ah. Markay dhibaatooyinku dhacaan, waxaan noqon karnaa jahwareer iyo rajo la'aan, laakiin haddaan Rabbiga sugno, isagu wuu inagu dhaqaaqi doonaa.
Kadib toddobaatan sano oo wanaagsan oo aan ku noolaa nolol barakeysan anigoo ah Masiixi heeganka ah, waxaan ku biiri karaa ereyada Boqor Daa'uud: "Kan xaqa ahu waa inuu wax badan ku xanuunsado, laakiinse Rabbigaa ka caawiya waxyaalahaas oo dhan" (Sabuurradii 34,20). Waxaa jiray waqtiyo aanan aqoonin sida loo tukado, sidaa darteed waxaan ku qasbanaaday inaan aamusnaado oo markaan dib u fiiriyo waxaan arkay inaanan keli ahayn. Xitaa markii aan su’aal ka keenay jiritaanka Eebbe, wuxuu u sugay samir inuu iiga caawiyo dhibaatada oo uu ii daayo si aan u arko weynaanta ammaanta iyo abuurkiisa. Xaaladda noocaas ah ayuu Ayuub weydiiyay: "Xagee joogtay markii aan dhulka aasayay?" (Job 38,4).
Ciise wuxuu kaloo yiri: «Nabad baan idiinka tegayaa, nabad baan idin siinayaa. […] Qalbigaagu cabsi ma qabo oo ma baqayo » (Yooxanaa 14,27). Waqtiyada ugu xun, waxay ina siisaa nabad ka gudubta fahamka.
Wuxuu ina siiyaa nolosha weligeed ah hadiyadda ugu weyn iyo rajada farxadda leh ee aan la joogno weligiis, halkaas oo aan mar dambe silica iyo xanuunku ku dhammaan doonin (Muujintii 21,4).
Badbaadada, is cafinta, nabada, rajadu, jacaylka iyo dareenka guud waa uun qaar ka mid ah hadiyadaha wanaagsan ee loo ballanqaaday rumaystaha. Aad baad u dhab tahay. Ciise xitaa wuu ka dhab badan yahay dhammaantood. Waa badbaadadeenna, cafiskeenna, nabadgalyadeena, rajadeenna, jacaylkeenna iyo dareenkeenna guud - waa hadiyadda aad ufiican uguna wanaagsan ee ka timaadda xagga Aabbaha.
Dadka aan rumaysadka lahayn, ha ahaadeen kuwa caabuda, caqiido ama rumaystayaal kaleba, waa inay sidoo kale ku raaxeystaan ​​hadiyadan wanaagsan. Markaad aqbasho deeqda badbaadada ee dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix iyo adoo aamminsan in Ilaah iyaga siin doono Ruuxa Quduuska ah, waxaad la kulmi doontaa nolol cusub iyo xiriir rabaani ah oo ah Ilaaha saddex geesaha oo dhan ah. Xulashada adigaa iska leh.
Waxaa qoray Eben D. Jacobs